သီချင်းချစ်သူတိုင်းက အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ တေးဂီတဗီဒီယိုမျိုးစုံကို ကြည့်ရှုဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းနားလည်ကြပြီး YouTube ရဲ့ သီးသန့် “billion views club.” ထဲကို သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းတွေနဲ့ တေးဂီတတစ်ချို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ Luis Fonsi & Daddy Yankee’s တို့ ပူးပေါင်းသီဆိုတဲ့ “Despacito” ဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာပဲ အမြင့်ဆုံးအခြေအနေကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီး Youtube မှာ ကြည့်ရှုသူအများဆုံးတေးဂီတဗီဒီယိုအဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်။ (for reference, ကမ္ဘာ့လူဦးရေဟာ ၇.၅ ဘီလီယံရှိပါတယ်)။ “Despacito” ရဲ့ ကြည့်ရှုသူကတော့ ၇ ဘီလီယံရှိပါတယ်။ Ed Sheeran ရဲ့ “Shape of You” ကတော့ ၅ ဘီလီယံရှိပြီး ဒုတိယကြည့်ရှုသူအများဆုံးနေရာမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ YouTube မှာ ကြည့်ရှုသူအများဆုံးတေးဂီတဗီဒီယို (၁၀) ပုဒ်ကို မျှဝေချင်ပါတယ်။
၁။ “Despacito” – Luis Fonsi feat. Daddy Yankee (7 billion views)
၂။ “Shape of You” – Ed Sheeran (5 billion views)
၃။ “See You Again” – Wiz Khalifa feat. Charlie Puth (4.7 billion views)
၄။ “Uptown Funk” – Mark Ronson feat. Bruno Mars (3.9 billion views)
၅။ “Gangnam Style” – PSY (3.8 billion views)
၆။ “Sorry (PURPOSE: The Movement)” – Justin Bieber (3.3 billion views)
၇။ “Sugar” – Maroon5(3.3 billion views)
၈။ “Roar” – Katy Perry (3.1 billion views)
၉။ “Thinking Out Loud” – Ed Sheeran (3.1 billion views)
၁၀။ “Counting Stars” – OneRepublic (3 billion views)